नेपालमै पहिलो पटक नास्टले बनायो अक्सिजन सिलिण्डर, परीक्षण सफल भए व्यावसायिक उत्पादन - Tech News Nepal Tech News Nepal
सिजीको इन्ट्रीसँगै इन्टरनेटको प्रतिस्पर्धा नयाँ दिशामा, स्पिड बढाउँदै
बुधबार, बैशाख २९, २०७८ १३:५५
अनलाइनमा यसरी हेर्नुहोस् आज रातिबाट सुरु हुने युरोकप
अर्को वर्षसम्म फेसबुक म्यासेन्जर प्रयोग नगर्न विज्ञको आग्रह
एक सातामै हार्मोनी ओएसका प्रयोगकर्ता एक करोडले नाघे
टेलिकमको एफटीटीएच सेवा लिनेलाई मोबाइल डेटा निःशुल्क
भीपीएन के हो र यसले कसरी काम गर्छ
यी ठाउँमा उपलब्ध छ सीजीको इन्टरनेट
२०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट दिने तरखरमा डिशहोम
डिशहोममा गाभियो प्रभु टिभी, सेवा माइग्रेसनको प्रक्रिया सुरु
के तपाईंको मोबाइल दर्ता छ ? छैन भने
सीजीले सुरु गर्‍यो इन्टरनेट सेवा, ९९९ रुपैयाँमै १२०
भोलिदेखि परीक्षण हुने टेलिकमको 'भीओएलटीई' सेवा के हो
कोभिड भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन ? यसरी अनलाइनबाटै
नेपालमै पहिलो पटक नास्टले बनायो अक्सिजन सिलिण्डर, परीक्षण सफल भए व्यावसायिक उत्पादन
काठमाडौं । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले नेपालमै अक्सिजन सिलिण्डर बनाउने भएको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत सामग्री उपयोग गरी अक्सिजन अभाव पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ नास्टले यसको तयारी थालेको हो ।
यसका लागि नास्टले उद्योग क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरेको छ । जसअनुसार नास्टको तर्फबाट वैज्ञानिक तथा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत शंकर ढकालले यो परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट इन्जिनियरहरु सुजन श्रेष्ठ, कृष्णा ढकाल र पूर्णराज सुवेदी यसमा संलग्न रहेका छन् । वैज्ञानिक ढकालका अनुसार सिलिण्डरको मोड्युल तथा प्रोटोटाइप तयार भइसकेको छ ।
‘अक्सिजन सिलिण्डर टेस्टिङका लागि पनि नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पूर्वाधार उपलब्ध छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी आफैंले टेस्टिङको डिजाइन र सेटअप पनि बनाउनुपर्ने भएको छ ।’
कोरोना भाइरसको पहिलो लहरसँगै नास्टले ‘नास्ट कोभिड १९ कम्ब्याड मिसन’ अन्तर्गत कोभिडसँग जुध्न सकिने प्रविधि विकासमा अग्रसरता देखाएको थियो । जसमा हालसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी विज्ञ तथा प्राविधिकहरु आवद्ध भइसकेका छन् ।
नेपालमा अक्सिजन सिलिण्डर बनाउने तथा परीक्षण गर्ने कार्य अहिलेसम्म हुन नसकेको भए पनि एलपीजी ग्याँस सिलिण्डरको भने काम भइरहेको छ । कोशी ग्याँस र नेपाल ग्याँसले नेपालमै एलपीजी ग्याँस सिलिण्डर बनाउने र परीक्षण गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।
नास्टमा विकास गरिएको अक्सिजन सिलिण्डर तिनै ग्याँस उद्योगको ल्यावमा परीक्षण गर्ने प्रयास समेत भएको थियो । एलपीजी ग्याँस सिलिण्डर १५ केजी प्रति वर्ग सेन्टिमिटरको चाप धान्नसक्ने किसिमले बनाइएका हुन्छन् ।
तर अक्सिजन सिलिण्डरले भने १५० केजी प्रति वर्ग सेन्टिमिटरको चाप थेग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा ग्याँस सिलिण्डरको टेस्टिङ उपकरणको क्षमता र सेटअपमा अक्सिजन सिलिण्डरको परीक्षण हुन सकेन ।
त्यसपछि नास्टमै अक्सिजन सिलण्डर परीक्षणको सेटअप समेत बनाउन थालिएको वैज्ञानिक ढकालले जानकारी दिए । ‘हामी भोलि बिहीबारसम्म यो सेटअप तयार पारिसक्छौं,’ टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने ।’
हाल चीन र भारतमा बनेका अक्सिजन सिलिण्डर नेपाल ल्याउने गरिएको छ । भारतमै अक्सिजन सिलिण्डरको चरम अभाव भइरहेको बेलामा चेपालले चीनबाट सहयोग मागिरहेको छ । यसै क्रममा मंगलबार मात्र हवाई जहाजमा ३०० थान अक्सिजन सिलिण्डर चीनबाट नेपाल ल्याइएको छ ।
चीनबाट अक्सिजन सिलिण्डर नेपाल ल्याउन धेरै समय र खर्च लाग्ने देखिएपछि नेपालमै यसको विकास गर्न थालिएको नास्टले जनाएको छ । तयार पारिएको अक्सिजन सिलिण्डर ‘प्रेसर टेस्ट’मा सफल देखिएको खण्डमा नेपालका उद्योगहरुमा तत्कालै बनाउन सकिने बताइएको छ ।
‘यो डिजाइनले परीक्षण पश्चात नास्टबाट मान्यता प्राप्त गरेको खण्डमा नेपालका जुनसुकै उद्योगले निश्चित मापदण्डमा रहेर व्यावसायिक रुपमा अक्सिजन सिलिण्डर बनाउन सक्छन्,’ वैज्ञानिक ढकालले भने ।
उनका अनुसार चीन र भारतबाट आउने अक्सिजन सिलिण्डरमा प्रयोग भएकै धातु प्रयोग गरी त्यही स्वरुप तथा डिजाइनमा अक्सिजन सिलिण्डर विकास गरिएको छ । ‘अक्सिजन सिलिण्डर बनाउन हामीले ६ एमएम मोटाइ भएको धातु प्रयोग गरेका छौं,’ उनले भने ।
नास्टमा विकास भएको अक्सिजन सिलिण्डरको परीक्षण सफल भएको खण्डमा हाल कोरोना महामारीका कारण नेपालमा देखिएको विद्यमान अक्सिजन अभावमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
अक्सिजन सिलिण्डर मात्र नभएर विभिन्न स्थानमा रहेका अक्सिजन प्लान्टको क्षमता बढाउने र त्यसको विकल्पमा गर्न सकिने कामको सन्दर्भमा समेत कोभिड कम्ब्याट मिसनको टिमले प्रयास गरिरहेको वैज्ञानिक ढकालले बताए ।
अप्टिकल फाइबरमार्फत तोसिबाले निर्माण गर्‍यो ह्याक गर्न नसकिने क्वान्टम नेटवर्क
काठमाडौं । तोसिबा कम्पनीका अनुसन्धानकर्ताले ६०० किलोमिटर लामो फाइबर नेटवर्कमार्फत क्वान्टम इन्फर्मेसन पठाउन सफल भएका
काठमाडौं । ह्वावेले हालै सार्वजनिक गरेकाे परिस्कृत अपरेटिङ सिस्टम हार्मोनी ओएसका प्रयाेगकर्ता एक करोडभन्दा बढी
७ महिनामा भारतमा थपिए एप्पलका २० हजार कर्मचारी
काठमाडौं । पछिल्लो समय एप्पलले भारतमा प्रडक्ट एसेम्बेलका साथै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
त्रिविले अनलाइनबाट स्नातकोत्तर तहको भर्ना लिने
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको नयाँ भर्ना अनलाइन माध्यमबाट खोल्ने भएको छ ।
सिजीको इन्ट्रीसँगै इन्टरनेटको प्रतिस्पर्धा नयाँ दिशामा, स्पिड बढाउँदै मूल्य घटाउँदै
स्मार्टफोन सुरक्षित रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने ?
टेकपाना विक्ली टेक अपडेट, २८ जेठ, २०७८